I-Il Cortile - i-loft kwindawo eluhlaza, amanyathelo ama-2 ukusuka kwiziko
I-loft encinci enenxalenye yentendelezo yangasese, umgangatho ophantsi, osanda kulungiswa ngokwemigaqo yanamhlanje yokusebenza kwamandla kwaye ixhotyiswe ngeendonga ezithatha isandi. Indawo yobuchule kwisithili esiphilileyo, esigcwele imisebenzi kunye neeklabhu, kwindawo eluhlaza. Ilungele labo abafuna ukuba atyelele eli ziko (15 imiz), abafundi (Campus Einaudi 1 min), ukwenzela abahambi zoshishino, kuba abathandi ngobunono kunye fitness (umjikelo indlela kunye neembaleki ecaleni komlambo ukuya Club Colletta).
Iloft ligumbi elinye eline mezzanine. Kumgangatho ophantsi kukho indawo yokuhlala (enebhedi yesofa yesiFrentshi), ikhitshi kunye nokufikelela kwigumbi lokuhlambela elineshawa enomatshini wokuhlamba kunye nesomisi. Ibhedi ephindwe kabini ibekwe kwi-mezzanine, ifikeleleka ngokulula. Ubukho bentendelezo yangaphandle yabucala yenza le ndawo yokuhlala yonwabe ngakumbi kuwo onke amaxesha onyaka.
Nceda uqaphele: i-mezzanine isenokungakhululeki kubantu abade kakhulu (ngaphezu kwe-1.85 yeemitha). Izinyuko azinalo isango lokhuseleko lomntwana.
Indawo yokuhlala ikwisithili saseRegio Parco, indawo edlamkileyo neyinyani yaseTurin. Ungafumana iivenkile, iivenkile zokutyela kunye neebhari ezinonikezelo lwentsusa kunye nomgangatho. Umlambo iDora kunye nepaki yeColleta ekufutshane ibonisa indawo enohlaza kunye neengoma ezithandwa ngabakhweli beebhayisikile kunye neembaleki. Ekubeni iTurin sisixeko esincinci kwaye apho unokuhamba khona ngokulula, indawo yesithili iqhinga ngokwenene ukunandipha ukuzola kwendawo kunye nokukwazi ukutyelela ngokulula kumbindi wesixeko (imizuzu eyi-15 ngeenyawo) okanye iindawo ezinomdla kwiziganeko. ezifana Pala Alpitour (imizuzu eli-15 ngemoto), i-Allianz Stadium kunye Lingotto iziko leMiboniso (imizuzu engama-20 ngemoto). Indawo yokuhlala nayo ikufuphi kakhulu neYunivesithi (Campus Einaudi), iCineporto (ngeCagliari) kunye nesibhedlele saseGradenigo.
Ngexesha lokuhlala kwakho ndiya kufumaneka nayiphi na imfuno ngefowuni.
Inombolo yomthetho: 00127201190